'Muujinta' Becka Paulson 'oo uu qoray Stephen King wuxuu ku wajahan yahay CW
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Muujinta' Becka Paulson 'ee Stephen King wuxuu ku wajahan yahay CW
'Muujinta' Becka Paulson 'ee Stephen King wuxuu ku wajahan yahay CW
CW waxay qaadatay xuquuq la qabsi Stephen King ayaa sheeko gaaban "Aayaadka 'Becka Paulson" oo hoos imanaya cinwaanka shaqada Aayadaha sida laga soo xigtay Deadline.
Ka dib markii ay si kama 'ah isku toogtay maskaxda iyada oo qoriga ciddiyaha, Pollyanna-ish Becca Paulson waxaa qortay Jesus-ka in ka badan si uu u noqdo "doorbidiisa" joojinta apocalypse. Si loo badbaadiyo adduunka, Becca waa inay caddeysaa in dhulkeenna qotoda dheer ee dib loo soo celin karo - laga bilaabo magaaladeeda bartamaha-galbeed.
Maisie Culver (Man Joogtada Last) ayaa lagu wadaa inuu qoro taxanaha iyadoo lagu saleynayo sheekada King, Katie Lovejoy ayaa u adeegi doonta sidii soo saare fuliya.
Sheekada waxaa markii hore lagu daabacay arin ah Rolling Stone dib ugu noqoshada 1984 waxaana loo adeegsaday inay ahaato qalab laga soo qaatay qaybtii 1990-kii XUDUUDDA awgiis (sawirka kore). Dhacdadaas waxaa jilay Catherine O'Hara (Schitt's Creek), John Diehl (Stargate), iyo Steven Weber (iftiinkiis taxane yar). Weber sidoo kale wuxuu jiheeyey qaybta.
In kasta oo aan waligeed lagu darin mid ka mid ah aruurinta King, haddana waxaa loo qaabeeyey sidii qayb hoosaad buugiisa ku jirta Tommyknockers-ka.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida Culver u maamulo inuu u ballaariyo sheekada gaaban oo taxane ah, in kastoo shaki la'aan ay jiraan fursado badan oo lagu dhisay sharraxaaddeeda.
iHorror ayaa kuu soo gudbin doonta Aayadaha maadaama faahfaahin dheeraad ah la heli karo.
Katie LovejoyMaisie CulvermuujintaMuujinta Becka PaulsonAdnan BoqorCWWaylon Jordan
DAAWO: Trailer-ka filimka 'Live' ee Director Rob Grant ayaa ah mid qarsoodi ah oo xasaasi ah!
Filimka 'Sputnik' ee 'Trailer' wuxuu keenayaa 'Extraterrestrial', Gory Terror